राष्ट्रपती को कदम ले बढाएको आशंका, अब को निकास के होला? – नेपाल डायरी डट कम
मे 5, 2009 मे 6, 2009 by nepaldiary
राष्ट्रपती को कदम ले बढाएको आशंका, अब को निकास के होला?
लोकतन्त्र बिधिको शासनले चल्ने कुरा हो ,कुनै ब्याक्ती राम वा बलराम को सनक र लहडमा होइन । कानुनी साशन, लोकतन्त्रको मर्म हो,मुटु हो । लोकतन्त्रमा सम्मती र बिमती राख्न पाईन्छ । आफुलाई लागेका कुरा लेखेर बोलेर सुनेर र सुनाएर सहमति र असहमती जनाउन पाईन्छ तर कानुन सम्मत ।
बिधिको सासन, कानुनको सर्बोच्चता र संबिधानको पालना गर्ने सपथ खाएर राष्ट्रपती बनेका हाम्रा महामहिम (?) राष्ट्रपती ले के गरे ? कस्तो कदम चाले ? र उनको कदम ले भाबी नेपाल-नेपाली को भबिष्यमा के असर (कु-असर) पर्छ ? किन भने राष्ट्रपली काङ्रेस, एमाले को मात्र हुँदैनन , देशका सबै जनता, जुनासुकै बिचार र जुनसुकै मत राख्ने जनाताको साझा राष्ट्रपती हुनु पर्ने रामबरण ले कस्को उक्साहट, कस्को आसिर्बाद र कस्को धोती समातेर निर्बाचित सरकार लडाउने-भिडाउने गरी सेनाको आडमा कु गरे ।
के गर्लान अब राष्ट्रपतिले ?
राष्ट्रपती ले आउदो २६ गते भित्र सहमति जुटाइ नयाँ सरकार बनाउन आबहान त गरे तर आगामी २६ गते त के अर्को २६ गते भित्र पनि सरकार बन्ने सम्भाबना न्युन् छ ।
संसद र सडक दुबै तिर बाट आन्दोलन चर्काउने निर्णय गरेको माओबादिले कटवाल लाई करबाही र राष्ट्रपती ले माफि माग्नु पर्ने अडान राखेको छ । के माफि माग्लान त राष्ट्रपती ले ? अरुको उक्साहटमा लागेर जन निर्बाचित सरकार गिराउने खेलमा लाग्ने खलनायक राष्ट्रपती ले त्यती सजिलै माफि माग्लान ? पत्याउन सकिदैन । उता एमाले को चरित्र र फोरम को मौका परस्त राजनीति हेर्दा पनि तत्कालाई कुनै सरकार बन्ने र संसद चल्ने दुबै सम्भाबना देखिदैन ।
एउटा जाबो सेनाको प्यादको पछी लागेर रामबरण ले आफ्नो निधारमा कलंक को टिका मात्र लगाएनन अपितु जारी शान्ती प्रकृया र संबिधान लेखन प्रकृया लाई समेत मसानघाट पुर्‍याए । आगामी ईतिहासले उन्को कार्य को समिक्षा त गर्लानै । अरुको उक्साहाटमा लागेर सत्ता गिराउने बनाउने खेलमा लागेर राष्ट्रपती ले जुन असंबैधानिक कदम चाले, त्यस्को जवाफ भबिष्य ले पक्कै माग्ने छ । सत्ता गिराउन , बनाउन, सेनाको गुलामी गर्न जनताले न एमाले काङ्रेस, माओवादीलाई जिताएका हुन, न त रामबरण लाई राष्ट्रपती नै बानाएको हुन । तर नालायक हरुले जनाताको अभिमत लाई तिलान्जली मात्र दिएनन , भद्रगोल बनाए देसलाई । एक दिन जनताले त्यसको हिसाब किताब पक्कै माग्ने छन , जवाफ छ राम, बलराम, बाबुराम हरु सँग ?
अब को निकास
अब समस्याको एउटै निकास छ -रामबरणको रजिनामा, कटवालको बिदाइ र काङ्रेस पनि सम्मिलित साझा सरकार । नत्र भड्खालोमा जाने भो देश । त्यसको पहिले पहल रामबरण ले नै गर्नु पर्छ । अझ पनि धाक धम्की को बिज्ञप्ती जारी गरेर उक्साहट र बुइ चढेर राष्ट्रपती कुर्लन थाले भने भिरमा पुगेको यो मुलुक लाई ईन्द्र त के उस्को बाउ चन्द्रे ले पनि बचाउन मुस्किलै पर्ला ।
रामबरण ले राजिनामा नदिने हो भने न त सान्ती प्रकृया टुङो मा पुग्ने भो न त नयाँ संबिधान नै बन्ने भो । समस्याको गाठो फुकाउन प्रचन्ड ले जसरी बिना हिच्किचाहट र सहज तरिकाले निकास दिए, राष्त्रपती महोदय, अलिकती टाउको भित्र को गिदिमा गूदी छ् भने , पद छोडेको सबभन्दा राम्रो । त्यसो गरे तपाईंको मात्र होइन , सबैको कल्याण हुन्छ । त्यसै पनि २-४ जना वकिल ले तपाईं को कुर्सी जोगाउने सम्भाबना ततकाल लाई देखिदैन । पैसाको ब्यापार गर्ने हुन वकिल-टिकाराम / भिमार्जुन -जे पनि बोल्छन तर सर्बोच्च न्यायालया दुई चार जना वकिल को सनक को भरमा शायद नचल्ला ।
Posted in नागरीक,नेपाल डायरीTagged democracy,Nepal,President
अघिल्लो बेमौसम को राग नअलाप ।
अर्को राष्ट्रपती द्वारा अर्को कदम को तयारी,असंबैधानिक कदम नचाल्न र चाले राजिनामा दिने -सभामुख